गर्मी संग-संगै मनसुनको मौसममा कस्तो फेसन गर्ने त ? « Salleri Khabar
गर्मी संग-संगै मनसुनको मौसममा कस्तो फेसन गर्ने त ?
फेसन पारखीहरु हरेक मौसममा उनीहरु आफूलाई फेसनेवल राख्न तत्पर रहन्छन् । अहिले गर्मी संग-संगै मनसुनको मौसम भएको हुनाले हरेक दिनजसो पानी परिरहेको छ । यो मौसममा कस्तो फेसन गर्ने त ?
यसपटकको गर्मी मौसममा लाइट रंग भन्दा पनि ब्राइट कलर का पहिरनहरु बढी फेसनमा छन् । गर्मीमा हल्काफूल्का रंगभन्दा गाढा रंगका पहिरन लगाउँदा तपाईं भिडभाडमा समेत अलग देखिन सक्नु हुनेछ ।
तपाईं पनि अफिस जाँदा अथवा पार्टी जाँदा अथवा परिवारसंगै राती डिनरकै लागि जाँदा समेत यो मौसममा ब्राइट कलरका पहिरन लगाउनु भयो भने सबैको नजर तपाईंमा पर्न सक्छ ।
चर्को गर्मीमा जसरी उज्यालो कलरका साथै गाढा रातो, गाढा पहेंलो तथा रोयल ब्लू रंगलाई सबैले आफ्नो रोजाइ बनाइरहेका छन् । बजारमा अहिले फूल वन कलर सूट, कुर्ता तथा रोयल ब्लू साडी पनि फेसनमा छन् । तपाईं पनि आफ्नो रोजाइका पहिरन लगाएर फेसनेवल देखिन सक्नु हुनेछ ।
रोयल ब्लू : यदि तपाईं आफ्नो आउटफिटलाई बेग्लै स्वरुप प्रदान गर्न चाहानु हुन्छ भने त्यसमा थोरै प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ । नीलो रंगको सलवार-सूटमा पनि त्यही रंगको सिक्वेन्स वर्क गराउन सक्नु हुनेछ । रोयल ब्लूसंग अहिलेको मौसममा सिल्भर प्रिन्टको पनि ट्रेण्ड छ । कुनै सामान्य रोयल ब्लू पहिरनलाई पार्टी वेयर बनाउनका लागि त्यसमाथि सिल्भर एम्ब्रोइडरी गर्नु उचित हुन्छ ।
गाढा पहेंलो रंग : मनसुनको सिजनमा पहेंलो रंगका पहिरनमा जो कोहि ग्ल्यामरस देखिन्छ । वसन्ती पहेंलो रंग यतिबेला फेसन उद्योगको टप लिस्टमा छ ।पार्टी तथा कुनै खास समारोहका लागि पहेंलो रंगमा गरिएको जरी वर्कले पहिरनलाई अझ बढि आकर्षक देखाउँछ ।यदि तपाईं दुब्ली-पातली हुनुहुन्छ भने पहेंलो रंगका पहिरन लगाएर फेसनेवल देखिन सक्नु हुनेछ ।
गाढा रातो रंग : गर्मीको यो मौसममा लागि उपयुक्त हुने अर्को एउटा रंग छ-रातो । खुशी र उत्साहले भरिएको यो रंग मुख्यतयाः जाडो मौसमका लागि अनूकुल मानिन्छन् । यसपटक हट रेड पहिरनहरु बजारमा यत्रपत्र पाइन थालेका छन् ।
सावधान ! लगातार लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा हुन सक्छ मृत्युको खतरा
अध्ययन भन्छ, ‘कोराना महामारीका बेला स्वास्थ्यका लागि योगाभ्यास अति उपयोगी’
अध्ययन भन्छ, 'कोराना महामारीका बेला स्वास्थ्यका लागि योगाभ्यास अति उपयोगी'
गर्मी मौसममा घरलाई यसरी खुल्ला राखौ !